Eco Administrator – Page2– Yangon University of Economics
Business Plan Contest!
December 15, 2020 Eco Administrator
Business Plan Contest! စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုသူ များအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းပါ။ ၁။မည်သည့်လုပ်ငန်းအ မျိုးအစား နှင့်မဆို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ၂။ စာလုံးရေကန့်သတ် ထားခြင်း မရှိ၊ ပုံစံသတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိ၊ လွတ်လပ်စွာရေးသားနိူင်ပါသည်။ ၃။ ဆန်းသစ်သော အတွေးအခေါ် (Creative idea) အမှန်တကယ်ဆောင် ရွက်နိုင်မှုရှိမရှိ ( practical) ဆိုသည့် အချက်ပေါ်တွင် အဓိက ထားရွေးချယ်မည်။ ၄။ မူပိုင်ခွင့် အားလုံး စာတမ်းရှင်ကသာပိုင်ဆိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၅။ စာတမ်းအားလုံးကို လည်းလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်း ထားပေး Read More …
Donation of COVID-19 protection and necessary materials from Yangon University of Economics
October 14, 2020 October 14, 2020 Eco Administrator
Yangon University of Economics organizedaceremony to donateatotal of mmk 140 Laks medical equipment and PPE suits to the committee of Yangon General Hospital on prevention, control and treatment of COVID-19 at Yangon University of Economics on Read More …